Kulan Sanadeeddkii 19aad, ee Jaaliyaadka [diaspora] Somalida Ogadeniya oo qaban qaabadeedu ka socoto magaalada London. – Rasaasa News
Kulan Sanadeeddkii 19aad, ee Jaaliyaadka [diaspora] Somalida Ogadeniya oo qaban qaabadeedu ka socoto magaalada London.
August 5, 2014 – Jaaliyaadka Somalida Ogadeeniya ayaa sanad walba kullan isugu yimaadaan dal ka mid ah dalalka reer galbeedka. Kullan sanadeedku wuxuu bilowday September 1995, kaas oo kolkii ugu horaysay ka dhacay Jaamacada London School of Economics [LSE].
Shirwaynaha Jaaliyaadka Somalida Ogadeeniya, wuxuu ku bilowday kulan aqoonley [Academic] oo ujeedadiisu ahayd daraasad sidii wax loogu qaban lahaa halganka. Kulankaas oo tan iyo kolkii uu bilowday ku socda hanaan aad u wanaagsan oo sanadle ah, saldhigna u ah tiir ka mid ah tiiraraka halganka ONLF.
Kulanka waxaa sanad walba ka qaybgala Jaaliyaadka Somalida Ogadeeniya ee degan dalalka dibadaha, gaar ahaana kuwa galbeedka. Waxaa kale oo iyaguna si madaxbanaan uga qaybqaata aqoonyahanada Soomaalida Ogadeeniya, aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo kuwa shisheeye.
Kulanka waxaa shiishka lagu saaraa taariikhda halganka Soomaalida Ogadeeniya, isbadalada siyaasadeed iyo bulsho ee ku soo kordha halganka iyo siyaasada geeska Afrika. Waxaa kale oo shiishka lagu saaraa waxqabadka Jaaliyaadka iyo unugyada Jwxo ee dibadaha ka jira.
Qaban qaabada kulan sanadlaha Jaaliyaadka Somalida Ogadeeniya oo ka socda London, ayaa sanadkan leh xiisa gaar ah. Waxaana la filayaa in warbixino dhab ah oo aan hore loo ogayn lagu soo bandhigi doono inta kulanku socdo. Warbixinada badankoodu waxay noqon doona xogo dhab ah oo laga soo qoray gudaha Ogadeeniya, maamulka kilalka iyo siyaasada Atoobiya, kuwaas oo ay jeedin doonaan Qurba joog maamulka kilalku hor ugu martiqaaday degaanka.
Kulan sanadlaha Jaaliyaadka Somalida Ogadeeniya oo lagu wado in uu dhaco September 12, 2014 ayaa diyaar garowgiisu bilowday xili hore, lana diray fariimihii casuumaad ee martida ka qayb galaysa kulanka.
Waxaa dhinac socda kulan sanadeedka Jaaliyaadka Somalida Ogadeeniya, 30-dan guuradii ONLF, oo ku beegan August 15, 2014.
Ogaden: Extra-Judicial Killings Continue Causing Increasing Violence
Beesha Ciise oo Dawlada Itoobiya ku Mudaaharaday Sheegayna In ay Jabhad Noqon